भागरथी बलात्कार-हत्या अनुसन्धानमा सुल्झिन बाँकी पाटा :: Setopati
भागरथी बलात्कार-हत्या अनुसन्धानमा सुल्झिन बाँकी पाटा थप अनुसन्धान गर्न भजाइनल स्वाब काठमाडौंको प्रयोगशालामा
खिलानाथ ढकाल काठमाडौं, माघ २६
सविता बुढा काठमाडौं, माघ २६
बैतडी दोगडाकेदार गाउँपालिका-७ की १७ वर्षीया भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको पोष्टमार्टम रिपोर्टले देखाइसकेको छ। भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको रिपोर्टले देखाए पनि प्रहरीको अनुसन्धानले अझै सतप्रतिशत नतिजा निकालिसकेको छैन।
घटना भएको चार दिन पुगिसके पनि प्रहरीले उनको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न को थिए पहिचान गरिसकेको छैन। तर, अनुसन्धानको दायरा ‘साँघुरो’ बन्दै गएको प्रहरीको भनाइ छ।
भागरथी प्रकरणको अनुसन्धानमा नसुल्झिएका केही पाटा छन्।
पहिलो, उनको बलात्कारपछि हत्या एकै व्यक्तिबाट हो वा सामूहिक?
यसबारे प्रहरी अझै अन्योल नै छ।
पोष्टमार्टम रिपोर्टअनुसार उनीमाथि जबरजस्ती करणी भएको छ। करणीपछि तत्कालै घाँटी थिचेर हत्या गरिएको छ।
शवको प्रकृति र पोष्टमार्टम रिपोर्टले ‘सामूहिक’ किटान गर्न सकेको छैन। एकै व्यक्तिले घटना गराए भन्नेमा पनि यकिन छैन।
‘एउटै व्यक्ति संलग्न हुनलाई त्यो व्यक्ति निकै बलवान थियो र उसले बलात्कारपछि तत्कालै हत्या गर्न सक्यो भन्ने घटनास्थलबाट प्रष्ट प्रमाण जुट्न सकेको देखिँदैन,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख डिआइजी उत्तम सुवेदी भन्छन्, ‘सामूहिक हो भन्नका लागि सामूहिकताको संलग्नता पनि किटान गर्न सकिँदैन।’
हालसम्म प्राप्त रिपोर्टमा भागरथीको घाँटी थिचिएको छ। यौनांगमा चोट देखिएको छ। तर, शरीरका अन्य भागमा चोट छैन। त्यसैले प्रहरीले सामूहिक हो भन्न नसकेको हो।
‘सामूहिक बलात्कार हुँदा देखिने क्रियाकलापहरू घटनास्थलमा देखिँदैनन्, तर घटना गराउन अन्यले सहयोग पनि गरेको हुनुपर्छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘त्यसका लागि केही समय पर्खिनुपर्ने हुन्छ।’
सुवेदीका अनुसार त्यो भनेको विधिविज्ञान प्रयोगशालाको रिपोर्ट हो। भागरथीको बलात्कारपछि हत्या हुँदा भेटिएका प्रमाणहरू रगत, भजाइनल स्वाब, कपडाहरू प्रयोगशालामा पठाइएको छ।
दोस्रो, भागरथी विपन्न परिवारकी हुन्। त्यसकारण उनको आर्थिक कारण बलात्कारपछि हत्या भएकोतर्फ अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको देखिँदैन।
‘भागरथीलाई आर्थिक कारण बलात्कारपछि हत्या गरिएको भन्ने पाटो बलियो देखिन्न,’ सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकेश सिंह भन्छन्।
त्यसैले, अनुसन्धान अधिकारीको भनाइ छ- भागरथीलाई बलात्कार गरियो र घटना लुकाउन तत्कालै हत्या गरियो।
घटनामा भागरथीसँग परिचित व्यक्ति नै संलग्न थियो भन्ने आधार भने बलियो रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
किनकि, भागरथीको ठूलो ‘दुश्मनी’ कसैसँग थिएन।
तेस्रो, अपराध गर्नेले उपयुक्त ठाउँ रोजेको छ। वरपर कसैले देख्न वा कराउँदा सुन्न सकिने स्थान छैन।
प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी सिंहका अनुसार भागरथी बुधबार दिउँसो २ बजेसम्म आफू पढ्ने सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयमा साथीहरूसँगको सम्पर्कमै थिइन्।
२ बजेअगावै स्कुल छुट्टी भइसकेको थियो। स्कुल छुट्टी भएपछि भागरथी बजारतिर हिँडिन्।
सिंहका अनुसार भागरथी स्कुल छुट्टी भएपछि नजिकैको खोचलेक बजार पुगेकी थिइन्। त्यहाँ पुगेपछि उनले आफ्नी एक साथीलाई फोन गरेर सँगै जान अनुरोध गरिन्।
भागरथीसँगै कमर्स पढ्ने उनको विद्यालयका २२ जना विद्यार्थी छन्।
तीमध्ये केही साथीहरूका अनुसार भागरथी विद्यार्थीसँगै स्कुलबाट हिँडेकी थिइन्। स्कुलबाट पाँच मिनेट पर खोचलेक बजार पुगिन्छ।
त्यहाँ उनकै स्कुलमा कक्षा ११ मा पढ्ने तीन जना भाइहरू भेटिएका थिए।
तीमध्येका तर्कराज भट्टले दिउँसो २ बजतिर भागरथीसँग खोचलेक बजारमा भेट भएको बताए।
‘खोचलेकको धारामा हाम्रो भेट भएको थियो, पहिला उसैले हामीलाई आज त यति छिटो स्कुलबाट किन आयौ भनेर सोधेकी थिइन्,’ उनले भने।
आफूसँगै भागरथीकी साथी ‘कपाल काट्ने कामले आएको’ भन्ने जवाफ दिएको उनले बताए।
उनी यति कुरापछि ‘ए ल त है’ भनेर भागरथी हिँडेको उनले बताए।
भागरथी खोचलेकबाट हिँड्दा बजारमा अरु पनि केही विद्यार्थी थिए। उनीसँगै भने तीन जना साथीहरू थिए। भागरथीको गाउँबाट कमर्स पढ्ने भने त्यो स्कुलमा उनीमात्रै थिइन्।
बजारमा उनीसँग साथी भए पनि घर जाने बाटो अलग भएकोले उनी त्यही बजारबाट छुट्टिएको उनका साथीहरू बताउँछन्।
केही दिन अगाडि उनका बुबाको मृत्यु भएकोले स्कुल आउन थालेको पनि केही दिन मात्र भएको प्रधानाध्यापक बलदेव नाथले बताए।
‘उनी नियमित क्लासमा सहभागी भएको १३ दिन मात्रै भएको थियो,’ उनले भने।
साथीले समय लाग्छ भनेपछि भागरथी एक्लै घर फर्केको प्रहरीको अनुसन्धानले पनि देखिन्छ।
उनी सधैं हिँड्ने बाटो लवलेक सामुदायिक वनको जंगल छिचोलेर घर पुग्थिन्। त्यस दिन पनि सदा झैं फर्केकी थिइन्।
तर, उनीसँग अरू थप कोही साथमा थिएनन्?
एसएसपी सिंह भन्छन्, ‘थिएनन्।’
‘किनकि, उनी कहिले साथीसँग, कहिले एक्लै स्कुल जाने-आउने गरेको देखिन्छ,’ सिंहले भने, ‘त्यसदिन पनि उनले साथीलाई सँगै घर जाउँ भनेकोसम्म अनुसन्धानले देखाउँछ।’
घर पुग्नुभन्दा एक किलोमिटरअगाडि भागरथीको शव फेला परेको छ। त्यो उनको स्कुलभन्दा दुई किलोमिटर टाढा हो।
यसरी एक्लै घर फर्केकी भागरथीलाई कसैले बाटो ढुकेर बसेको थियो वा कसैले पछ्याइरहेको थियो भन्ने चाहिँ खुलिनसकेको सिंहले बताए।
भागरथीको शवसँगै उनले बोक्ने मोबाइल पनि फेला परेको छ। त्यो मोबाइलमा घटनाअघि को-को सँग सम्पर्क भयो भन्ने पनि देखिएको छ।
त्यही मोबाइल फोनमा भएको कुराकानीका आधारमा पनि अनुसन्धान अघि बढेको सिंहले बताए।
‘भागरथीसँग नजिक रहेर सम्बन्ध विस्तार गर्नखोज्ने, उनीसँग लभ अफेयर्सका लागि कसैले जोड गरेको थियो वा भागरथी गर्ने व्यवहारबाट कोही चिढिएको थियो कि भन्नेतर्फ पनि अनुसन्धान भइरहेको छ,’ सिंहले भने, ‘हामी परिणाममुखी नतिजा निकाल्न खोजिरहेका छौं।’
यसका लागि भागरथीसँग फोनमा वा सामाजिक सञ्जालमा सम्पर्क भएका सबै व्यक्तिहरू प्रहरीको ‘क्लोज सर्भिलेन्स’मा रहेको सिंहले बताए।
घटना भएको दिन र त्यसअघिका दिनमा भागरथी तथा उनका साथीभाइहरूबीच मोबाइल र सामाजिक सञ्जालमा गफ भएको देखिएको छ। ती गफहरू अहिले अनुसन्धानका आधारभूत तत्व बनेका छन्।
भागरथी बलात्कारपछि हत्याको अनुसन्धानमा प्रमाणहरू प्रशस्त जुटिसकेको सिंहले बताए। ‘कतिपयले निर्मला पन्तजस्तो अनुसन्धान जटिल भनेको भनेका छन् तर घटनास्थलमा भेटिएका सबुत अपराधीको विपक्षमा आइसकेका छन्,’ सिंहले भने।
पन्तको हत्यापछि पानीमा शव भेटिएको थियो। भागरथीको हत्या जंगलमा भएको छ र हत्याराले प्रमाण लोप गराउन सकेको नदेखिएको सिंहले बताए।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २६, २०७७, ०९:४६:००